Shiinaha iibinta kulul 15mm Dual Action Polisher 900W Gawaarida Faahfaahinta Qalabka Mashiinka X15 soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Checheng
Iibinta Hot 15mm Dual Action Polisher 900W Gawaarida Faahfaahinta Mashiinka X15
Shayga MAYA: CHE-X15
Mashiinkayaga X15 polisher polisher polisher is very easy to use and may cut cut xagashada natiijooyinka xirfadeed. Dabeecadda iyo geerka qalabka wax lagu gooyo ee wareegga ah ayaa la xoojiyay waxayna siiyeen koror 20% ah xoogga iyo iska caabbinta. Awoodda awooda leh ee 900W matoorrada iyada oo loo marayo tan ugu badan ee oksijiin ah ee rinjiga. Intaa waxaa sii dheer, mashiinkan qiiqa gawaarida wuxuu adeegsadaa CNC sax ah-mishiinka birta miisaanka culus iyo jaangooyooyinka Japan NSK, taas oo siinaysa 80% adkeysi weyn. Inta badan mashiinada suuqa kuyaala waxay leeyihiin miisaan culus oo loo yaqaan 'Zn counterweight' kaas oo si deg deg ah udhaca, markii si xirfadeysan loo isticmaalo, wuu dabcay oo wuxuu lumiyay xoog gooyntii. Xakamaynta xawaaraha suulka ku shaqeysa waxay siineysaa xakamaynta xawaaraha isbeddelka laga bilaabo 1800 ilaa 4800 OPM, waxay ka dhigi kartaa gaarigaaga maalinlaha ah ee faahfaahinta shaqada mid waxtar badan oo fudud.
1pc 5in saxan taageero, 1pc kwo, 1pc D-xamil, 1pc buug, 1pr buraashka kaarboonka, 1pr fur + dhaqe
1.Waxay ku rakiban yihiin jaangooyooyinka NSK ee Japan iyo CNC si sax ah u shaqeynaya STEEL miisaanka culus, waxay ka dhigeysaa mid isku dheelitiran oo adkeysi badan.
4.Barbitka Weyn, oo waxtar badan u leh nadiifinta gaariga.
5.Soo qaadista xakamaynta 6-xawaaraha.
6.Soft xajinta dahaarka daboolan iyo xamili, raaxo badan.
7.Karboodyada dhinaca burushka kaarboonku waxay u sahlaan dadka isticmaala inay beddelaan buraashka kaarboon.
Hore: 12mm 900W Orbital Car Wax Buffer Random Auto Polish Mashiinka X12
Xiga: 6 Xawaaraha Xawaaraha Isbedbeddelka 21mm Mashiinka Mashiinka Baabuurta ee X21